अब पुरुषहरुका लागि पनि गर्भनिरोधक इन्जेक्सन | Lifemandu
अब पुरुषहरुका लागि पनि गर्भनिरोधक इन्जेक्सन
| सोमबार, ३० पुष, २०७५
एजेन्सी । भारतमा पुरुषहरुका लागि गर्भनिरोधक इन्जेक्सन विकास गरिएको छ । इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चको नेतृत्वमा ट्रायल पूरा गरेर रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
चाँडै नै यसको व्यवसायिक प्रयोजनका लागि स्वीकृति मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म पुरुष बन्ध्याकरणका लागि शल्यक्रिया गर्ने गरिएको थियो । तर अब शल्यक्रिया आवश्यक पर्ने छैन । अब एउटा इन्जेक्सनले गर्भनिरोधकको काम गर्नेछ । एकपटक इन्जेक्सन लगाएपछि १३ वर्षसम्म काम गर्ने र सफलता दर ९५ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । काउन्सिलका डा. एस शर्माले १३वर्षसम्म काम गर्ने रेकर्ड रहेको बताए । उनले भने, ‘आशा छ यसले यो भन्दा पनि बढी समय काम गर्नेछ ।’
आइआइटी खड्गपुरका वैज्ञानिक डा एस के गुहाले यो इन्जेक्सनमा प्रयोग हुने औषधिको खोजी गरेका थिए । यो एक खालको सिन्थेटिक पोलिमर हो । शल्यक्रियाका क्रममा वीर्य यात्रा गर्ने जुन नसा काटिन्छ, त्यही नसामा यो इन्जेक्सन दिइन्छ । यो इन्जेक्सनको एउटा डोज ६० मिलि हुन्छ ।
चिकित्सकका अनुसार इन्जेक्सन दिएपछि नेगेटिभ चार्ज हुन थाल्छ र वीर्य टुक्रिन थाल्छ र गर्भ रहने सम्भावना हुँदैन । यसको प्रयोग पहिले मुसा, पछि खरायो र त्यसपछि अन्य जनावरमा गरिएको थियो । पछिल्लोपटक यसको प्रयोग मानिसमा पनि गरिएको थियो ।
के गर्भनिरोधक औषधीले प्रजनन क्षमतामा असर गर्छ ?
गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोगबारे महिलामा अनेकन भ्रम हुन्छ । जस्तो कि, यो चक्की कहिले प्रयोग गर्ने, कहिले नगर्ने । त्यसमाथि अहिले बजारमा थरीथरीका गर्भनिरोधक औषधी आएको छ । यी औषधीहरुको प्रयोग अलग(अलग स्
काठमाडौं - विदेशमा उत्पादित नयाँ–नयाँ भ्याक्सिन र औषधिको प्रभावकारिता जाँच्न नेपालीलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ । बर्सेनि हजारभन्दा बढी संघसंस्थाले नेपालीमाथि अनुसन्धान गर्दै आएकोमा केही औषधि,
गर्भ निरोधक चक्कीको प्रयोग विना नै रोक्न सकिन्छ गर्भाधान, जान्नुहोस् सजिला विधि